Maraykanka oo taageeri doona Qaxootiga Soomaalida ee iskooda ugu soo laabanayo. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Maraykanka oo taageeri doona Qaxootiga Soomaalida ee iskooda ugu soo laabanayo.
Hadal qoraal oo ka soo baxay Waaxda Arrimaha Dibedda ee Maraykanka ayaa lagu sheegay inay Dowladda Maraykanka si xooggan u taageerayaan Qaxootiga iskooda ugu laabanayo dalalka ay asal ahaan ka soo jeedaan ee ay ku jiraan Somalia iyo South Sudan.
Qoraalka waxaa kaloo lagu xusay inay Maraykanka si niyadsami leh kala shaqeynayaan Dowladda Kenya iyo xubnaha Beesha Caalamka sidii xal waara loogu heli lahaa Dhibaatooyinka haysta Qaxootiga.
Hadalka Dowladda Maraykanka ayaa soo baxay, iyadoo ay Hay’addaha Samafalka iyo kuwa Xuquuqda Aadanaha si kulul u cambaaraynayaa qorshaha ay Dowladda Kenya ku doonayso in lagu xiro Xerooyinka Dhadhaab iyo Kakuma oo ay ku jiraan in ka badan 600,000 oo Qaxooti ah, kuwaasi oo 450,000 ka mid ah yihiin Qaxooti u dhashay Somalia.
Hay’adda QM ugu qaabislan Arrimaha Qaxootiga ee UNHCR waxay Isniintii la soo dhaafay sheegtay inaan Xilligan Qaxootiga lagu celin Karin dalalka Somalia iyo South Sudan, maadaama aysan weli ka jirin Nabad dhamaystiran.
Hay’adda Xuquuqda Aadanaha ee Human Rights Watch ee laga leeyahay daalka Maraykanka waxay sheegtay inaysan Saraakiisha Kenya soo bandhigin caddaymo muujinaya inay Qaxootiga Soomaalida ku lug lahaayeen weeraradda Argagixisadda ee ka dhacay gudaha Kenya.
Jimcihii la soo dhaafay oo ay bishan May ahayd 6-da ayuu Xoghayaha Joogtadda ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Kenya, Dr. Karanja Kibicho ayaa ku sheegay in Ammaanka Danaha Qaranka Kenya darteeda tahay sabata ka dambeysa go’aanka lagu xiray Xerooyinka Dhadhaab iyo Kakuma.
Ma aha markii ugu horreysay ee ay Dowladda Kenya soo saaraan Go’aan la xiriira in dib loo celinayo Qaxootiga Soomaalida ee ku nool Xerooyinka Qaxootiga ee Dhadhaab iyo Kakuma.
Madaxweyne-ku-xigeenka dalka Kenya, William Rutto ayaa 13 bilood ka hor waxa uu ku dhawaaqay Dib-u-celinta Qaxootiga Soomaalida, kadib, markii ay Alshabaab weerareen Jamaacadda Garissa bishii April 2-da ee sannadkii hore.